1. Name Tune အကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။
မိမိထံဖုန်းခေါ်ဆိုလာသောအချိန်ခေါ်ဆိုသူမှကြားရသော calling ring အသံနေရာတွင် မိမိနာမည်ပါဝင်သောသာယာကြည်နူးဖွယ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသံများဖြင့် အစားထိုးထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော Name Tune ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ CRBT ၀န်ဆောင်မှု၏ အောက်တွင်ရှိသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
2. Name Tune ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်ကရယူနိုင်မလဲ။
CRBT ၀န်ဆောင်မှုကို ဦးစွာရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် REGD သို့ မဟုတ် လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် REGMဟုရိုက်နှိပ်ပြီး၇၉၇၉ သို့စာတိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 7979 ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။ထို့နောက် http://lotaya.mpt.com.mm/service/crbt/name-tune လိုတရအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအမည်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. 7979 ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးအမည် ရွေးချယ်လို့ ရပါသလား။
မရရှိသေးပါ။ လိုတရ (သို့ ) MPT call center-106 (သို့ ) ၀၉ ၄၄၄၄၀၁၈၁၀ သုို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးရယူနိုင်ပါတယ်။
CRBT ၀န်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ရက်အသုံးပြုမှုအတွက် ၄၇ကျပ်နှုန်းစာရင်းသွင်းရမှာ ဖြစ်သလို၊ တစ်လအသုံးပြုမှုအတွက် ၁၀၅၀ ကျပ်နှုန်းကျသင့်မှာပါ။ Name Tune တစ်ပုဒ်အတွက် တစ်လလျှင် ၃၁၅ ကျပ်နှုန်းကျသင့်မှာပါ။
5. အခြားသီချင်းတွေ ၀ယ်ထားပါက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
အခြားသီချင်းဝယ်ထားပြီး Name Tune ထပ်ဝယ်ပါက တစ်လှည့်စီသီချင်းသံ ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
6. ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
MPT Sim Card အသုံးပြုသည့် မည်သူမဆိုအခြား Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုများအားရယူရသည့် အတိုင်းလွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။
7. Name Tune ကိုဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အခြားသီချင်းများကဲ့သို့ ဝယ်ယူထားသော Name Tune code ကို၇၉၇၉ သို့ ပေးပို့ ပြီးဖျက်နိုင်ပါတယ်။
8. မသုံးချင်တော့ရင်/စာရင်းဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၇၉၇၉ သို့ UNR ဟုပေးပို့ စာရင်းအားရပ်ဆိုင်း၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
9. စာရင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာလက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
ဒါဆိုရင် စာရင်းသွင်းလို့မရနိုင်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းမရရှိနိုင်ပါ။ ဖုန်းငွေအလုံအလောက်ဖြည့်ပြီးမှသာစာရင်းပြန်သွင်းကြည့်ပါ။ CRBT ၀န်ဆောင်မှု အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
10. Name Tune ကိုရယူရင် ဘာတွေ ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ။
Name Tune ကိုရယူထားသူများအနေဖြင့် iPhone XSတစ်လုံးကံထူးနိုင်မှာပါ။ ပထမဆုံးရယူတဲ့ အယောက် တစ်ရာကိုလည်းဖုန်းငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်ပေးမှာပါ။ ကံစမ်းမဲကာလမှာ ၃ လကြာမြင့်မှာပါ။ ၁၂.၁၂.၂၀၁၈ မှ ၁၂.၀၃.၂၀၁၉အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုမဲပေါက်သူသည် MPT ရုံးသို့ မဟုတ် content provider ရုံးသို့ လာရောက်ထုတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
12. အသုံးပြုသူသည် အမည် အပြည့်အစုံကို Name Tune အဖြစ် တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုသူသည် အမည် အပြည့်အစုံကို Name Tune အဖြစ် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ MPT call center, MPT Facebook page နှင့် Content Provider call center သို့အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ် ပေးပို့ ပြီးဆက်သွယ် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁ လခန့် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး Content Provider သို့ မဟုတ် MPT call center မှ ပြန်လည် ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။